UMVUZO KAGAL GADOT NGOKUCHASENE NOHENRY CAVILL'S - DCEU
Umbutho Wamathala Eencwadi Amerika
I-Intanethi ikwiArms ngaphezulu kweMivuzo kaGal Gadot vs Henry Cavill's
Ibali lakhawuleza laya kwintsholongwane yokuba uGal Gadot wahlawulwa kuphela nge-300k yeedola Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo , kanti uHenry Cavill wafumana i-14 yezigidi zeedola Amadoda entsimbi.
Ngelixa kuyindalo ngokugqibeleleyo ukuba uzive ukhathazekile ngalo mzekelo ubonakalayo ubonakalayo weHollywood yesini sokuhlawula isithuba, konke akukho njengoko kubonakala. Ukuxelwa kukaCavill Amadoda entsimbi akuqinisekiswanga, kodwa ukuba ikho naphi na kufutshane neloo mali, sisiphumo seebhonasi emva kwebhokisi enefisi eninzi, hayi umvuzo wakhe wokuqala. Ngaphambi Amadoda entsimbi , ICavill yayiyinto entle engaziwayo kuninzi lwehlabathi elingazange limbukele Tudors (okanye Ndithimba iNqaba, Njengomtya omncinci waseCavill). Akukho ndlela uWarner Bros./DC amtyikitya kwifilimu yokuqala yezigidi kunye nezigidi zeedola ngaphambi kokuba babone iziphumo zobugorha.
Oku akukhange kubanqande kwi-Intanethi ukuphindaphinda amanani afunyenwe ngabadlali ababini ngokungathi beziimeko ezifanayo. Ngale ntsasa, ithandwa Ulutsha oluVogue Umbhali uLauren Duca uhlaziye intelekelelo xa wayethumela umyalezo (ngoku ucinyiwe):
UGal Gadot wenza i-300,000 yeedola kumfazi oMangalisayo xa kuthelekiswa ne-14M ye-Henry Cavill ye-Man of Steel. Oyena mntu unyanzelekileyo we-DC ngumsantsa wokuhlawula.
-Lauren Duca (@laurenduca) Nge-20 kaJuni 2017
Ngelixa ndingathambekiyo ukungavumelani nemvakalelo engemva kweTwitter kaDuca, njengoko kubekiwe ngasentla- kwaye Apha , Ngobunzulu into evanithi ngokuthambile ukuxela-oku akunjalo. Njengoko into evanithi ngokuthambile Icacisa, Imivuzo yaseHollywood, ngakumbi iifranchise kunye nabalingisi abangavavanywanga, yintsumantsumane:
Izivumelwano zaseHollywood zizinto ezintsonkothileyo — imivuzo idla ngokwenziwa mnandi ziibhokisi zeofisi, iibhampu ekuhlawuleni ezinye, okanye amanqaku kwixabiso elipheleleyo leegigastars. Kwii-superhero franchise ezisandula ukuqala, nangona kunjalo, inkqubo ihlala ilula: fumana inkwenkwezi ekunyukeni, ubhatale kancinci, emva koko ubonelele ngakumbi ukuba i-franchise iyasuswa. Ukumangaliswa nguvulindlela umzamo noRobert Downey Jr, uChris Evans, kunye noChris Hemsworth, bonke ekuthiwa bahlawulwa imali engaphantsi kwama-500,000 ngeedrive zabo zokuqala, kodwa ekugqibeleni bafumana umvuzo omkhulu kunamhlanje.
… Ke ngexa i-Gadot's 300,000 yeedola intle kakhulu xa ithelekiswa nezigidi ezenziwe yimovie yakhe, akazithengisanga mfutshane; Umlingisi akakasayini isivumelwano nge-Wonder Woman 2 engenakuphepheka, kwaye iiarhente zakhe ngokuqinisekileyo sele zisebenza ukurhola iipesenti ezili-10 zomhla wakhe wokuhlawula omkhulu.
URobert Downey Omnci uqhubekile nokwenza isitrayikhi-mna-phantsi-ndifile $ 50 yezigidi zeedola nje Ababuyisi Sixhiba , eyimali eyi-batshit ngokupheleleyo, kodwa ke, uyi-Iron Man, kwaye uMarvel uyihlawule. U-Downey Jr. uxelisile ukuba uncede abo asebenza nabo bacela kwaye bafumane ngaphezulu. Inqaku leli, izitudiyo ziya kwiinkwenkwezi zebhola ephantsi ezingavavanywanga iinkwenkwezi kunye nabalawuli xa bekwazi. Oku kwenzeka kuwo onke amashishini kwenye indawo, nawo.
Ewe, kuninzi lwethu, i-Gal Gadot ye- $ 300,000 yokuthatha ekhaya ngefilimu nganye iya kuba sisixa somhlathi. Ngokwemigangatho yaseHollywood ayisiyiyo, kodwa ungakhathazeki malunga neGadot- Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo Impumelelo enkulu ithetha ukuba uya kufumana iibhonasi ezinobubele, kwaye ngoku ukwimeko yokuxoxisana Okuninzi ngakumbi Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo ukulandelelana. Kwaye ngelixa isithuba sokuhlawula isini eHollywood siyinyani, iingxoxo ezinje ngeGadot vs. Cavill's enamanani angachanekanga aziva engancedi.
Ngaba i-bleach manga yenziwe
Ukuba kukho into kuyo yonke le nto yokucaphuka ngokwenene, kukuba uGadot wasayinwa kuphela kwisivumelwano semifanekiso emithathu, esibandakanya Batman v. USuperman , Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo , kunye nokuzayo I-Justice League . Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo Umlawuli uPatty Jenkins watyikitya kuphela ifilimu enye. Oku kuphakamisa ukuba iWarner Bros inokulindela Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo ukusilela. Banesilayiti esikhulu semiboniso bhanya-bhanya yeqonga ecwangcisiweyo kule minyaka imbalwa izayo, kwaye ngelixesha baya kwenza indawo yokuba Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo ukulandela, oku akubonakali ngathi sisicwangciso sokuqala. Ngaphandle koko, ngesele betyikitye uGadot, kwaye mhlawumbi neJenkins, kwiimovie ezininzi ngakumbi kumanqanaba amancinci ngelixa benethuba.
Thelekisa oku, uthi, Sebastian Stan, otyikitye isivumelwano semifanekiso esithoba kunye neMarvel kwangaphambi kwempumelelo UCaptain America: Ijoni lasebusika . Nokuba ijoni lasebusika liyakuphela liphethe ikhaka likaKapteni okanye hayi, ulilo ixesha elide, kwaye uMarvel wambamba kanye njengokuba inkwenkwezi yakhe yayikhula. Bayazi ukuba banezicwangciso ezininzi zexesha elizayo zeBucky Barnes. Akubonakali ukuba iWarner Bros yaziva ngendlela efanayo ngoDiana Prince.
Okwangoku, masiyonwabele ezinye zeetweets ezingcono malunga nayo yonke le kerfluffle yomvuzo.
Eli bali malunga noHenry Cavill ehlawulwa i-14 yezigidi zeedola kwi-MAN OF STEEL iyonke i-bullshit.
Mna, nangona kunjalo, ndihlawulwa i-14 yezigidi zeedola kwisiqendu ngasinye @NtsikeleloTyala .
-UGriffin Newman (@GriffLightning) Nge-20 kaJuni 2017
kwakhona… ndingahamba kakuhle ukuba ububhatale uHenry Cavill $ 14 yezigidi ukuze avele eMadodweni esuka kumalume omncinci ukusukela ngoku ade abe neminyaka engama-87 ubudala.
-Alex Abad-Santos (@alex_abads) Nge-20 kaJuni 2017
1. Umsantsa womvuzo btw. Abadlali / abadlali bezesondo bayabelana ngesondo.
2. IGal Gadot kufanele ukuba ifumene ngakumbi iWW.
3. UHenry Cavill akazange afumane i-14 yezigidi zeedola kuMntu weNsimbi.
-UJosh Spiegel (@mousterpiece) Nge-20 kaJuni 2017
Andikholelwa ukuba uGal Gadot kwafuneka asebenze okwethutyana ecoca iikheji zezilwanyana ngelixa uHenry Cavill ngokoqobo wayedla ngegolide eqinileyo yonke imihla
-Kibblesmith ⚔️ (@kibblesmith) Nge-20 kaJuni 2017
Superman? UHenry Cavill uyakuhlala enguDuke waseSuffolk entliziyweni yam..❤❤ pic.twitter.com/q6tm2LZLHY
- Elana Joy (@ elanajoy1982) Nge-20 kaJuni 2017
Ngokufanayo, uElana Joy. Kuyafana.
(nge into evanithi ngokuthambile , umfanekiso: Warner Bros./DC)
Iqhawe Elikhulu 6
portal 2 iimpawu zokulumkisa ii-coasters
abalinganiswa abamnyama be-sci fi
Isivakalisi esiqulethe zonke iileta
umonde nokholo kwiindawo eziphakamileyo
Iimuvi zeDisney ezinamahashe kuzo
yenza inuyasha no kagome banabantwana